Banking Offshore Banking iyo Formation Company, Trust, Qorshaha Ilaalinta Hantida
100 ee Malaayiin Dollar oo Badbaadiyey
Tan iyo 1906
Xudduudaha Badbaadada Offshore
Koonsalka Offshore: Sida iyo Sababta
Badbaadinta Hantida Waxyeelada
Maxaad u dooratay OffshoreCompany.com?
Waxaa lagu aasaasey 1906
Bixiyaha ugu weyn ee caalamiga ah ee caalamiga ah
Easy si aad u fahanto fiidiyowyada
Shirkadaha ugu sahlan dhoofka iyo xisaabaadka
Daacadnimo, daacadnimo, kalsooni
Shaqaale khibrad leh ayaa kaa badbaadinaya waqti
Inta badan tartamada tartanka adduunka oo idil
24 / 7 qof ku nool
La-talin xagga adeegga dibadda ah
Shaqaale buuxa oo buuxa shaqaalaha taageerada
Waxay aasaasaysaa Shirkadaha Dibadda,
LLCs, Trusts, iyo Xisaabaadka Baanka.
Sharciyadaha gaarka ah ee gaarka ah ee qarsoodiga ah iyo xeerarka bangiyada ee debedda waxay u oggolaanayaan asturnaanta dhaqaalaha iyo sidoo kale ilaalinta hantida ee furriinka, amaahda, xukunka iyo dacwooyinka.
Diiwaangelinta Shirkadda Offshore
Si loo dhiso shirkad dibadeed iyo / ama aad u guurto qaab-dhismeedkaaga shirkad aad ku leedahay xukunka dibadda waxay noqon kartaa tallaabo lagama maarmaan u ah ilaalinta hantidaada dacwaddaha, Intaa waxaa dheer, waxaad awood u yeelan kartaa in aad ka faa'iideysato canshuuraha caalamiga ah oo aad kor ugu qaaddo maalgelintaada dibada. Website-kani wuxuu ku salaysan yahay sannado cilmi baaris ah, waxaana loogu talagalay inuu yahay hagis kaas oo ku hagaajin kara talaabo talaabo ah oo ku saabsan sameynta iyo isticmaalka shirkadda "offshore company." Waxaad ka heli doontaa faa'idooyin daraasad ah si aad u sameysid hay'ad caalami ah oo aad wadatid ganacsigaaga adoo isticmaalaya koontada bangiga dibadda halkii aad ka heli laheyd, ama aad la wadaagto koontada degmada. Tusaale ahaan, Nevis, Cayman Islands, Panama, BVI iyo Hong Kong, tusaale ahaan, waa dhammaan qaybaha ugu caansan. Sidaa awgeed, waxaanu ku hagaajin karnaa sameynta shirkad ama jaangooynta aad dooratay. Ka dib, waxaan kaa caawin karnaa inaad sameysid koonto bangi oo ku saabsan ganacsigaaga oo aad sameysatid xafiis xafiis oo wafaqsan.
Shuruucda Nevis LLC waxay bixisaa qaar ka mid ah qaababka ilaalinta hantida ee gaarka ah iyo waxtarka leh si loo ilaaliyo xisaabaadka bangiga bankiga.
Wac Wada Talo lacag la'aan ah
Soo Gudbi Warqadahaaga
Shirkadda & Xisaabta Bangiga ayaa la furay
Faa'iidooyinka Cashuurta Dhulka
Si loo caddeeyo, samaynta ganacsiga ganacsigu maaha in laga baxsado canshuur ama lacag ka dhigta dawladda. Halkii, waxay ku saabsan tahay qaabeynta arrimahaaga sida habkan si looga faa'iidaysto sharciyada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah. Shuruucdaas oo ay heli karaan cid kasta oo daryeesha inay u isticmaasho lacagtooda. Sidaa daraadeed, waxaan ku tusi karnaa habab sharci iyo sharci ah si aad u sameysaan ganacsigaaga caalamiga ah si aad u fahamto faa'iidooyinka fog ee ka soo horjeeda ilaalinta hantida ee kaydka kharashka.
Dadka ku nool Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Australia iyo qaar ka mid ah wadamada kale, ayaa leh, iyo weyn, canshuur laga saaro caalamka dakhliga. Dhinaca kale, waxaad u maleyneysaa in Apple, Google iyo kuwo kale ay biilasha canshuurta ku dhufteen iyaga oo adeegsanaya farsamooyinka sharciga oo dhamaystiran iyada oo la adeegsanayo dhismayaasha dibedda. Waxaa intaa dheer, shirkadda caymiska ee maxaabiista ah ayaa ah hab kale oo macaamiishayadu si sharci ah u dallaceen biilasha canshuurta hoos yimaada IRC 953 (d) iyo 831 (b). Sidaa awgeed, waxaa jira siyaabo aad awood u yeelatid inaad sidaan sidan u sameyso, caawimadayada iyo hagida xirfadlayaasha ruqsada haysta.
Ma xoojin karno dhibicda ugu danbeysa. Waxtarrada canshuuraha dibadda waa meelo xasaasi ah oo sharciga ah. Marka, ka hor intaadan isticmaalin istaraatiijiyadaha caalamiga ah ee ujeedooyinka canshuurtu, hubi inaadan kaliya la hadlin CPA kasta. La hadal xisaabiye iyo / ama qareenka canshuurta ee ku takhasusay caawinta muwaadiniinta iyo dadka degan dakhliga dibadda. Waxa aad u badan tahay in aad ka gudubto xisaabin leh midabyo duulaya. Waxaa intaa dheer, waad seexan doontaa habeenkii, sidoo kale.
Samaynta Shirkadda Internetka
Hal istaraatiijiyadeed oo si guul leh u shaqeynaya ayaa ah in la isticmaalo shirkadda offshore si ay u shaqeyso ganacsigaaga internetka. Sidoo kale waa farsamo ay isticmaalaan Apple iyo Google. Haddii ganacsigaaga uu ku saleysan yahay internetka oo aad ku darayso shirkaddaada caalamiga ah si habboon, markaa, waxaa laga yaabaa inay leedahay faa'iidooyin canshuur oo soo jiidasho leh. Tani waxay dib u dhigeysaa bixinta canshuuraha, oo la mid ah IRA, tusaale ahaan. Aad bay muhiim u tahay inaad hesho talada canshuurta ee aqoon-xirfadeedka CPA oo ku hagaya adiga oo adeegsanaya istaraatiijiyadan. Isticmaalka qalabkaan si aad u badbaadiso lacagaha canshuurta waxay sidoo kale ku xiran tahay wadankaaga deganaanshaha iyo muwaadinimada iyo boqolkiiba hantida shirkadda, oo ka mid ah jilayaasha kale. Sidaa darteed, waa in loo isticmaalo oo keliya iyada oo la raacayo talobixin la-taliye canshuureed khibrad leh
Ganacsiga internetku wuxuu yeelan karaa saldhig macaamiil caalami ah. Tusaale ahaan, ma waxaad rabtaa inaad ku dhufato saldhigga macaamiisha 22? Dadka ka baxsan Maraykanka waxay ku saabsan yihiin 22 wakhtiyo ka weyn gudaha. Dunida adduunka ka baxsan UK waa xilliyada 109 ka weyn gudaha gudaha, 200 waxay ka weyn tahay dibadda Kanada iyo 304 wakhtiyada ka baxsan Australia. Waxaad helaysaa fikradda. Waa maxay sababta aad naftaada u xaddidan tahay qaabkii hore ee juqraafi ahaan loo xaddiday? Sidaa awgeed, aasaasida shirkad furan iyo koontada bangiga badda si aad u maamusho ganacsigaaga internetka waxay noqon kartaa qaab weyn oo aad ku dhisi karto tamar ka baxsan waddanka aad ku nooshahay.
Daqiiqado gudahood oo fayl garaynaya dacwad, qareen ayaa kuu soo gudbin kara dukumiinti kale oo lagu xakamaynayo xisaabtaada bangigaaga, gurigaaga, ganacsigaaga, iyo hantida kale. Si kastaba ha ahaatee, ka shaqeynta ganacsiga ganacsiga ayaa ka dhigeysa xannibaad weyn oo ah awoodda qallafsan ee kartida ah ee lagu xakameynayo laguna qabsanayo khayraadka aadka u shaqeysay.
Meelo badan oo Dakhli ah
Maxaa dhacaya haddii shirkadaada maxalliga ah ay ku dhacdo waqtiyo adag? Xasuuso hoos u dhaca US iyo Yurub ee 2008, 2009 iyo sanado ka dib? Inta lagu jiro wakhtiga dhaqaalaha ee Koonfur Bari Asia iyo Australia ayaa kor u kacay. Markaad haysato mishiinka lacag-bixinta, waxaad xaddideysaa soo-gaadhista dhaqaalaha deegaanka.
Maxaad u heli la'dahay meherado badan oo caalami ah oo caalami ah isku mar oo isku mar wada shaqeeya
Qiimaha jaban ee lagu dhisayo shirkado badan oo ka shaqeeya xeebaha iyo xisaabaadka, oo ay weheliso adeegyada cusub ee qiimaha jaban ee websaydhku waxay ka dhigayaan maalgashiga bilowga ah hoos u dhac baaldi marka loo eego awooda fog ee soo socota. Ururkayagu wuxuu bixiyaa adeegyadan oo dhan, waxayna leeyihiin tobanaan kun oo macaamiil ah. Haddii xooluhu doonayo inuu miro goosto waa inuu marka hore beero abuurka. Dhamaan miraha ma korayaan laakiin inbadan oo kamid ah wey koraan; iyo kuwa samayn kara isaga iyo qoyskiisa inay ku noolaadaan qarniyo badan.
Shirkaddu waxay ku bilowday 1906. Waxaan nahay dareen xooggan oo ku saabsan adeegyada maaliyadeed ee xeebaha iyo ilaalinta hantida ee dacwooyinka. Shirkadeenu waxay ka qayb qaadatay sharciyada Nevis, Cook Islands iyo Dominica. Mabaadiida shirkaddayadu waxay si joogto ah ula hadlaan madaxda dawladaha si ay saameyn ugu yeeshaan sharciyada danta ugu fiican ee macaamiisheena.
Waxaan Qoraynaa Sharciyada
Shirkadda Dibadda waxay gacan ka gaysatay sharciyo ka jira Nevis, Cook Islands, Dominica iyo Kongo. Waxaan si joogto ah ula kulannaa madaxda dalka si aan u wanaajino qaab dhismeedkooda sharciyeed.
Maamulahayaga oo leh Vance Amory, Premier of Nevis (1992 - 2006 iyo 2013 - 2017)
Maamulaheena Roosevelt Skerrit, Ra'iisul Wasaaraha Dominica
Maamulahayaga oo leh Clément Mouamba, Raiisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Congo (Brazzaville) iyo Qareenkeena Yonathan Amselem
Maamulahayaga Mark Marktletley, Premier of Nevis (2017-Present)
Waan Qadarinay Macaamiisha
Waxaan kaliya buuxiyaa foomamka internetka iyo dukumintiyadayda ayaa waxaa diyaarinaya khabiir takhasus leh oo leh la-talin bilaash ah.
Waxaan rabaa inaan sheego inaan si buuxda ugu riyaaqay tayada adeegga. Dhexdhexaadin !!! Waxaan helnay dukumiintiyada shirkadda iyo EIN iyo sidoo kale warqad oggolaansho ah oo ka timid xafiiska Guddoomiyaha Gobolka. Ma noqon karto mid farxad leh. Waxaan dadka u ogeysiinayaa shirkad weyn oo aad ka tirsan tahay. Thanks, Ron & Roxy A.
Isticmaalka qalabka ganacsiga ee shirkadaha dibadda, waxaan ilaaliyay dakhliga ganacsiga iyo hantida shakhsiyadeed ee ka yimaad dacwad aad u daran.